Y.M.C.A. ngaBantu baLali - Izinto Zobugcisa
Y.M.C.A. ngaBantu baLali
Y.M.C.A. imele 'uManyano lwamaKhristu lwaBaselula,' oluqhele ukunxulunyaniswa neendawo zokuzilolonga ezihlala zibonelela ngendawo yokuhlala yamadoda. Abantu belali bacula malunga ne-YMCA njengendawo onokuhlala kuyo nawo onke amakhwenkwe. Kucacisiwe ukuba le yeyona ndawo ifihlakeleyo yokuqokelela abafana abathandana nabasetyhini ukuze bashiye iingxaki zabo kunye neengxaki ngasemva kwaye bazikhulule. Ngelixa amazwi awanazo naziphi na izingqinisiso ezithile zesini, ingoma yaba ngumhobe wesini.
Ngo-1977, abavelisi uJacques Morali noHenri Belolo baqokelela iqela elayilwa ukutsala abaphulaphuli besini esinye ngelixa babedlala ngokuxhaphaza (abanye babethi bayabaxhaphaza) kwa loo mbono wumbi. Ababhali beengoma uPhil Hurtt kunye noPeter Whitehead bachukunyiswa ukuze babhale iingoma ezinomxholo ophantsi kwesini. Iindima kunye nesinxibo zikhethwe ngononophelo; Phakathi kwabo kwakukho inkwenkwana, ibhayisekile, ijoni, ipolisa, kunye nomsebenzi wokwakha ogqibe umnqwazi onzima.
Ikhredithi yokubhalwa kwengoma kwi'YMCA 'iya kuMorali, Belolo kunye noVictor Willis, owayelipolisa kwiqela.
Ukungaqondi okuqhelekileyo kukuba abantu belali yayiliqela lesini lesini sonke. Imvumi ekhokelayo uVictor Willis wayengekho. Ngapha koko, ukusukela ngo-1978-1982 wayetshatile noPhylicia Ayers-Allen, owayedlala uClair Huxtable kwi Umboniso weCosby kwaye kamva watshata umsasazi wezemidlalo uAhmad Rashad. UHenri Belolo wayengenguye umntu athandana naye, kodwa uJacques Morali wayenjalo, kwaye umfanekiso wahambelana nombono wakhe. Iindima ze-gay stereotype zidlale kakuhle kuluntu lwe-LGBT olunxulunyaniswa ne-disco ngelo xesha, kodwa xa ujonga ngasemva, kuyinto ehlekisayo ukucinga ukuba ii-disco 'ziyinto yesini' (akukho mntu wayekrokrela, uthi, John Travolta). Indawo yedisco, kunye nabantu baLali, babesamkela bonke.
Le ngoma inomdaniso onxulumene nayo apho abathathi-nxaxheba benza iileta ngeengalo zabo. Kuqhelekile ukuba kwenziwe emitshatweni nakweminye imibhiyozo, kwaye ithandwa kakhulu njengoko kulula kakhulu ukuyenza. Abantu baseLalini bawenza mnandi umdaniso xa becula ingoma; Ukutyhubela iminyaka baye ngamanye amaxesha banika imiyalelo ngendlela yokwenza ngokuchanekileyo. Bathi ezona mpazamo zixhaphakileyo zikwi-M kunye no-C: i-M yenziwe ngokuchanekileyo ngokuthinta iminwe yakho phambi kwakho, hayi ngokubeka iminwe yakho emagxeni ngokungathi ubiza ixesha lokuphuma elingama-20. I-C ihamba gwenxa xa abadanisi besenza umqondiso ekunene, ekubukeni kubaphulaphuli kuflop. Indlela echanekileyo yokwenza i-C ngasekhohlo, ke kujongeka ngathi ngu-C kubantu abajongene nawe.
Umbhali ongumlingani wengoma, uVictor Willis, uyanyanzelisa ukuba ayisiyo 'ingoma yesini,' kunye nomgca 'onokuxhoma nawo onke amakhwenkwe aphefumlelwe bubutsha bakhe, xa wayedlala ibhola yebhasikithi kunye nabahlobo bakhe kwi-YMCA. 'Ndifuna ukubhala ingoma enokulingana nendlela yokuphila kabani na,' yena uxelele iNews Corp Australia . 'Ndonwabile ukuba abahlali abathandanayo bayamkela njengengoma yabo, andinangxaki nayo.'
I-YMCA ephefumlele le ngoma yayiyi-McBurney YMCA kwi-West 23rd Street kwisiXeko saseNew York phakathi kwe-7 ne-8 yeendlela (ngo-2002, yafudukela kwisitalato se-14). Yayiyile YMCA uJacques Morali wabona, eyamnika umbono. Kwividiyo, iqela liqhuba kunye nesakhiwo njengemva.
Abantu belali benza ividiyo yale ngoma, eyayinqabile kwizenzo zaseMelika ngo-1978 kuba kwakungekho MTV. EYurophu, nangona kunjalo, bekukho iindawo ezininzi zokubonisa iividiyo, kwaye kulapho ikliphu yaBantu belali yafumana ezona mbono. Xa i-MTV yaphehlelela ngo-1981, badlala iividiyo ezininzi ezivela kwizenzo zase-Bhritane kwaye ezimbalwa babenazo kwizenzo zaseMelika ezinje ngeDevo, kodwa abantu belali kubonakala ukuba abayifanelanga ifomathi yabo.
Ngo-2008, Jikelezisa wabuza abanye abantu belali ngale ngoma. Nazi ezinye zeempendulo:
URandy Jones (inkwenkwana): Xa ndafudukela eNew York ngo-1975, ndajoyina iMcBurney YMCA kwisitalato sama-23. Ndathatha uJacques (Morali) apho kathathu okanye kane ngo-1977, kwaye wayeyithanda. Wayeyithanda indawo apho umntu wayenokuzilolonga kunye namatye okudlala, ukudlala i-basketball, ukuqubha, ukuthatha iiklasi kunye nokufumana igumbi. Ngapha koko, noJacques ethandana nesini, ndandinabahlobo abaninzi endandisebenza nabo ababekwicandelo lemiboniso bhanyabhanya yabantu abadala, kwaye wayechukumisekile kukudibana nabantu awayebabonile kwiividiyo nakwiimagazini. Olo tyelelo lwam lwatyala imbewu kuye, kwaye yindlela awayefumana ngayo uluvo lwe 'Y.M.C.A.' - ngokuya ngqo kwi-YMCA.
UDavid Hodo (umsebenzi wokwakha): Sigqibe icwecwe lethu lesithathu I-Cruisin ' , kwaye besifuna enye ingoma njengokugcwalisa. UJacques ubhale 'YMCA' malunga nemizuzu engama-20 - uncuthu lwengoma, ikwayara, ulwandlalo. Emva koko wayinika uVictor Willis wathi, 'Zalisa ezinye.' Ndandinokungabaza malunga nokubetha kwethu, kodwa ngomzuzu ndakuva 'Y.M.C.A.,' Ndazi ukuba sinento ekhethekileyo. Kuba bekuvakala ngathi kuthengiswa. Kwaye wonke umntu uthanda intengiso. 'YOKWENZA' Ngokuqinisekileyo inemvelaphi yesini. Yile nto wayeyicinga uJacques xa wayibhala, kuba icwecwe lethu lokuqala [1977 Abantu belali ] yayiyeyona cwecwe lesini. Ndiyathetha, jonga kuthi. Sasiliqela lesini. Ngaba le ngoma yabhalwa ukuba ibhiyozele amadoda angama-gay kwi-YMCA? Ewe. Ngokuqinisekileyo. Kwaye abantu abathandanayo bayayithanda. '
Umboniso unento yokwenza nempumelelo yale ngoma, kodwa imigca yeempondo ikwayinto enkulu. Bacwangciswa nguHorace Ott, owayesebenze kumkhondo ka-Aretha Franklin, Nat King Cole, Joe Cocker no-Eartha Kitt. Kwakhona wabhala ngokubhaliweyo Sukundivumela ndingaqondwa kakuhle , 'eyayibhalwe kuqala nguNina Simone.
Kwi 'YM.C.A.,' u-Ott wavula ingoma ngokudubula kweempondo ezazisebenza njengomnxeba wokucacisa. Ukuqhubela phambili kwi-chorus, wongeze ezintlanu ezihlabayo ezixutywe nemitya kunye ne-percussion ukwenza enye into eyahlukileyo ngaphakathi kwengoma.
EMelika, oku kugxunyekwe kwi # 2, apho ichithe iiveki ezintathu, kuqala ngasemva ' Le Freak 'nguChic kwaye emva kweeveki ezimbini emva kwesinye isibhengezo,' Ngaba ucinga ukuba ndingumntu othandana naye? nguRod Stewart.
Kwamanye amazwe amaninzi, yaya kwi # 1. Yayithandwa kakhulu e-UK, apho yayihlala phezulu iiveki ezintathu, nase-Australia, apho yayiyi # 1 ezintlanu. I-Australia yaba ligwiba kwiqela.
Ukuhamba kweengalo ezaziwayo ezihamba nale ngoma kwavela xa iqela lisenza Umgangatho waseMelika Kwisiqendu esidlalwe ngoJanuwari 6, 1979. Yayingeyiyo ibhendi leza nayo - yayingabaphulaphuli.
Ukufika kwabo kwikwayara, iqela laphosa izandla emoyeni. Isihlwele salandela ngokufanayo, kodwa saqhubeka songeza ezinye izijekulo koonobumba abaseleyo. Akucaci ukuba abantwana kubaphulaphuli bayikhethile kwangaphambili, okanye ukuba bayenzile kwangoko, kodwa Umqolo Umninimzi uDick Clark wayechukumisekile ngabo. Emva kokusebenza, wayenenjineli yesandi ehlaziya umkhondo kwaye wayidlala kwakhona ukuze iqela libabukele bekwenza. Njengokuba abantu belali besebenzisa izijekulo, uClark ubuza imvumi ekhokelayo uVictor Willis, 'Ucinga ungayenza le nto yesiqhelo?' Uphendula athi, 'Ndicinga ukuba kuya kufuneka.'
Le ngoma ithandwa kakhulu kwimidlalo, ngakumbi imidlalo ye-baseball apho idlalwa rhoqo phakathi kwee-innings. Ukusukela ngo-1996, le ngoma ibidlalile eYankee Stadium xa ibala labasebenzi lisihla kwindawo ye-inning yesihlanu. Abasebenzi bayayeka ukwenza izijekulo zengalo ngamaxesha afanelekileyo njengoko isihlwele silandela.
Lo ibingunyaka olungileyo kwiqela: Baphumelele i-World Series yabo yokuqala ukusukela ngo-1978 kwaye bonwabele ixesha labo lokuqala elipheleleyo ngo-shortstop uDerek Jeter, oza kuba ngukapteni wabo.
Abantu belali babona le ngoma njengengaphezulu kwe-albhamu, kodwa uNeil Bogart, umongameli werekhodi yabo, wabona amandla kwaye wenza isigqibo sokuyityhala.
I-YMCA iphinde yafaka igama layo kunye ne logo kwisidlaliso sayo esidumileyo, 'The Y' ngoJulayi 11, 2010. Ukutshintsha kwegama kuza emva kophando kubonise ukuba abantu abaninzi abayiqondi into eyenziwe ngumbutho. Abalandeli beLali yaBantu baphefumla ngesiqabu xa imvumi ephambili yeqela lokuqala, uVictor Willis, wakhupha ingxelo esithi olo tshintsho aluzukuyichaphazela ingoma. Wongeze ngelithi umdaniso ohamba kunye nawo, apho abathathi-nxaxheba basebenzisa iingalo zabo ukwenza ukumila kukanobumba ngamnye, ulapha ukuhlala ngokunjalo.
Ulwakhiwo, oku kuyafana kakhulu nabantu baseLalini abangatshatanga, 'San Francisco (Undifumene).' Zombini ezi ngoma zakha ingoma ebhengeziweyo, enesilayidi ezine: YIM, San-Fran-Cisc-O.
UJacques Morali ubhale umculo kwaye wavelisa zombini iingoma, ke le iyavakala. Abadlali beengoma babehlukile, nangona kunjalo, njengoko imvumi ekhokelayo uVictor Willis wayethathe indawo kaPhil Hurtt noPeter Whitehead kule ndima - into eyamzuzisa kakhulu kwimirhumo. NgokukaHurtt, uWillis wayesongele ngokuyeka ukuba uPhil wayebuyisiwe ukuze abhale iingoma. Xa uWillis washiya iqela, uHurtt wabizwa kwakhona ukuba abhale amazwi eengoma kwi-movie ye-Village Village ka-1980 AwunakuMisa uMculo .
Iindidi ngeendidi zengoma zazisetyenziswa kuthotho lwezibhengezo zikamabonakude zase-Bhritane kwiwebhusayithi yaseBritani yokuthelekisa amaxabiso iConfused.com ukuqala ngo-2010. Intengiso zaye zasebenzisa umculo njengesiqhelo esiqhelekileyo apho kongezwa iingoma ezintsha.
Nge-31 kaDisemba ngo-2008, i-Guinness World Records yaqinisekisa ukusebenza kwabantu belali kwisiqingatha se-Sun Bowl phakathi kwe-Oregon State kunye ne-Pittsburgh e-El Paso njengowona mkhulu umdaniso we-YMCA, kunye nabalandeli abangama-40,148 behamba, thabatha abafana abambalwa abangakhange zive ukhululekile ukwenza izijekulo ezinobumba kulayini webhiya.
Nini Jikelezisa ubuze uY.M.C.A. Imanejala yezonxibelelwano kwimithombo yeendaba uLeah Pouw ngale ngoma, uphendule wathi: 'Sise Y.M.C.A. bhiyozela ingoma. Ingxelo elungileyo malunga ne-Y.MCA noko sikunika abantu ehlabathini jikelele. '
Ngo-2017, uBoy George wakhululwa isiciko somculo ngokubambisana ne-YMCA Australia njengenxalenye ye Kutheni? iphulo, kunye nomzamo wokunxibelelana nabantu abancinci kwaye ubazise ukuba bamkelwe nokuba bangoobani.
ejolise ekukhanyeni kwimicimbi ebalulekileyo kubantu abancinci base-Australia: ukulingana komtshato, impilo yengqondo kunye nentswela-ngqesho kulutsha.
I-disco hit yathathwa njengebalulekileyo ngokwembali ngo-2020 ukungena kwiRegistry yokuRekhoda kaZwelonke kwiThala leeNcwadi leCongress 'njengomsebenzi' ngokwenkcubeko, ngokwembali, okanye ngokubonakalayo.
Abadlali be IOfisi Umngqungqo woku okwisiqendu 5 'seCafe Disco.'
UMongameli uDonald Trump usebenzise le ngoma ukuvala iirali zakhe ngexesha lomkhankaso wakhe wokunyulwa kwakhona ngo-2020, nangona abantu belali bemcela ukuba angakwenzi oko. Ukulandela uqinisekiso lokuphumelela kukaBiden kuTrump ngo-Novemba ka-2020 kunyulo lukamongameli, abaxhasi beBiden bahlekisa ngomongameli wangaphambili ngokudlala i-'YMCA.A. ezitratweni.
ibheleles uncedo oluncinci oluvela kubahlobo bam
bekukho inqaba enkulu yedwa elwandle
kuba ubenosuku olubi
Ukundibulala uthambe amazwi ka roberta